> Resource > Android > Sida loo hagaagsan Muuqaalka xiriir la Moto X
Dadka cusub ee la sii daayay Motorola Moto X Hodmin noloshaada mobile. Waxay ka jawaabi karaan codkaaga la taabashada lahayn. Mar kasta oo aad rabto in aad wax ka ogaado, Moto X samatabbixin doonaa macluumaadka si aad screen qarinayo. Haddii aad heli karto telefoonka smart Android qabow, waxaa laga yaabaa in aadan sugi karin in la sameeyo taleefan ama qoraal saaxiibadaa si ay u muujiyaan farxad. Si kastaba ha ahaatee, dhibaatada yimaado. Ma jiro wax xiriir ah oo ku saabsan Moto X, laakiin idinku waxaad ku badbaaddeen oo dhan xiriirada ee account Muuqaalka aad. Sidaa awgeed, aad leedahay si aad u hagaagsan xiriirada Muuqaalka iyadoo Moto X hore.
Waa wax sahlan in ay u hagaagsan xiriirada ka Outlook in Moto X. aad ku kalsoonaan kartaa barnaamij xisbiga saddexaad inay ka sameeyaan. The Wondershare MobileGo for Android waa barnaamij awood Android maamulka, kaas oo aad u saamaxaaya in ay u hagaagsan oo dhan xiriirada in Outlook 2003/2007/2010/2013 iyo Outlook Express in Moto X aan ku xirid ah.
Download version xorta ah maxkamad kasoo dajiyaan xiriirada ka Outlook in Moto X.
Tallaabada 1. Orod barnaamijka iyo xiriiriyaan Moto X in kombiyuutarka
Marka aad dhamaysato rakibidda barnaamijka, waxaad u ordi karaan kombiyuutarka. Connect aad Moto X in kombiyuutarka deeruhu in cable USB ah. Barnaamijka waxaa si toos ah iskaan doonaa Moto X oo soo bandhigaan uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. xiriirada Transfer ka aragti in Moto X
Tiirka tagay, guji Xiriirada si ay u muujiyaan suuqa kala xiriir ah. Riix Import / Dhoofinta on line ugu sareeya. In liiska jiido-hoos, dooran Import xiriirada ka computer . Markaas, liiska jiido hoos kale u muuqataa on xaq. Dooro ka Outlook Express ama ka Outlook 2003/2007/2010/2013 .
Barnaamijka waxaa lagu ogaan doonaa xiriirrada badbaadiyey in aad xisaabta Outlook. Ka dib markii in, in wada hadal pop-up ah, waa in aad doorato meel si loo badbaadiyo xiriirada laga keeno. Waxaad badbaadin karo xiriirada ee xasuusta telefoonka ama kaarka SIM. Haddii aad saxiixday xisaab qaar ka mid ah telefoonka aad Android, kuwaasoo ah idinka badbaadin karo xiriirada ku saabsan xisaabta. Markaas, kala iibsiga xiriir bilaabmin. Hubi in aad Moto X xiran yahay waqtiga oo dhan.
Bal eeg, xiriirrada Outlook ayaa la synced in aad Moto X hadda. Haddii aad ka heli xiriir leeyihiin tus qaar ka mid ah, waxaad iyaga ku milmaan kartaa adigoo gujinaya DE-nuqul.
Dhab ahaantii, ka sokow syncing xiriirada ka Outlook in Moto X, aad awood u xiriirada u hagaagsan ka Windows buug cinwaanka, Windows Live Mail in ay smartphone this. Haddii aad badbaadiyey qaar ka mid ah files vCard kombiyuutarka, sidoo kale iyaga oo aad ku wareejin kartaa in aad Moto X.